Ntupu waya hexagonal galvanized
Anyị na-achọ gị na ezinụlọ gị Merry Christam.Hope unu niile nwere a obi ụtọ ezumike! Nke a bụ eriri waya hexagonal anyị nke nwere ike ịchọ ụlọ gị mma. Mee ka ụlọ gị maa mma na ejiji. A na-akpọkwa waya waya hexagonal nke ọkụkọ. A na-eji ya eme ihe na ndụ anyị kwa ụbọchị.Y...
Ị maara ihe bụ ubi nsu? ubi nsu nke a na-akpọkwa ehi ngere.Ọ na-emepụta na-ekpo ọkụ tinye galvanized ígwè wires.Field nsu bụ ihe ọzọ dị irè, akụ na ụba anụ ọhịa na-àmà nger.Field nsu nwere ike iji dị ka ihe mgbochi n'akụkụ okporo ụzọ. iji chekwa anụmanụ...
Waya ọkụkọ na-abịa na nlele dị iche iche. Guages ​​bụ ọkpụrụkpụ nke waya ma ọ bụghị nha oghere. Ihe dị elu nke nlele ahụ, waya ahụ dị gịrịgịrị. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhụ waya nlele 19, waya a nwere ike ịdị ihe dịka 1mm. N'aka nke ọzọ ị nwere ike ịhụ waya 22 Gauge, nke nwere ike ịbụ appr ...
Waya ọkụkọ nwere nlele dị iche iche. Guage pụtara ọkpụrụkpụ waya ọ bụghị nha oghere. Na ala nlele ahụ, waya ahụ na-abawanye ụba. Dịka ọmụmaatụ, waya nlele 19, waya nwere ike ịdị ihe dịka 1mm n'obosara. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịhụ waya nlele 22, nke nwere ike ịdị ihe dịka 0.7mm thic ...
Anyị nọ na ngosi Batimat iji gosi ntupu hexagonal anyị, ntupu waya welded, ntupu njikọ waya chian, ngere ogige, ọnụ ụzọ ogige nye ndị enyi niile nọ n'ụwa niile. Ngwaahịa anyị na-ewu ewu nke ukwuu na ihe ngosi a.
Ọdịiche dị n'etiti obere eriri waya hexagonal na ntupu waya hexagonal dị arọ?
A na-eji waya igwe galvanized ma ọ bụ waya igwe nwere mkpuchi plastik mee ụgbụ hexagonal dị arọ. Ntupu bụ hexagonal, na dayameta waya dị n'elu 2.0 mm na n'okpuru 4.0 mm. A na-akpa ya ma mepụta ya site na igwe gabion dị arọ kwụ ọtọ. A na-ejikarị ya eme ihe maka nchekwa mmiri. Edebere oru ngo a...
Ị maara ka anyị ga-esi jiri eriri waya hexagonal?
Enwere ike iji eriri waya hexagonal dị ka eriri waya maka ọkụkọ na oke bekee, nke ejiri waya ígwè nwere obere carbon, nwere nhazi ntupu siri ike na elu dị larịị. A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọrụ ugbo dị ka nkwado na combustion. A na-ejikwa ya dị ka ogige maka ụlọ anụ ọkụkọ, fi ...
Ị maara oge ọrụ nke ogige ubi?
N'ihi hinge nkwonkwo nsu a na-eji na ebe iru mmiri, nchara na corrosion ga-apụghị izere ezere ime. Ogologo oge ole ka enwere ike iji ya n'ozuzu? The ihe nke na-eme ubi nsu & ehi nsu n'ozuzu nwere electric galvanized waya, ọkụ galvanized waya, plated Galfan ígwè waya, 10% aluminum zinc al ...
Ngwa nke welded waya ntupu Panel
site admin na 21-03-25
N'ozuzu, a na-eji ha eme ihe na ụlọ ọrụ na ọrụ ugbo n'ihi na ha nwere uru nkịtị nke nguzogide corrosion siri ike, ezigbo acid na alkali resistance na ogologo ndụ. Na mgbakwunye, mgbidi nchekwa, ifuru na osisi ngere na-eji agba dị iche iche nke PVC ntụ ntụ na-efesa n'elu ...
Gịnị bụ eriri waya hexagonal
Ntupu waya hexagonal bụ otu n'ime eriri waya nwere oghere hexagonal. Nke a ụdị hexagonal waya ntupu na-akpa site ígwè waya, obere carbon ígwè waya ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara wire.The elu ọgwụgwọ nwere ike ịbụ electric galvanized (nke a na-akpọkwa oyi galvanized), na-ekpo ọkụ tinye galvanized. na pvc mkpuchi.Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ na-ekpo ọkụ di ...
Ọmụma nke welded waya ntupu
welded waya ntupu na-welded site ígwè waya, carbon ígwè waya. The ntupu oghere bụ square. elu ọgwụgwọ nwere ike ịbụ electric galvanized, na-ekpo ọkụ tinye galvanized na pvc mkpuchi. The kasị mma mgbochi nchara bụ pvc mkpuchi welded waya net.Dịka udi nke welded waya ntupu, ọ nwere ike devided n'ime welded waya ntupu ...
Ihe ngosi dị ezigbo mkpa maka ụlọ ọrụ anyị
Ihe ngosi dị ezigbo mkpa maka ụlọ ọrụ anyị. Anyị na-aga ngosi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ọ bụla. Nke a bụ otu n'ime ihe ngosi nke anyị sonyere. Anyị nọ na Batimat na 4 ~ 8, Nọvemba, 2019 BATIMAT, ihe ngosi ihe ngosi ụlọ biennial na Paris, France, bụ nke The Reed Exhibitions Group haziri, nke jigoro 30 nke ọma.